‘Miaro ny fiainana:’ Fomba fiainan’ireo vazimba teratany, tena ilaina hamahàna ny olan’ny fiovaovàn’ny toetrandro · Global Voices teny Malagasy
Tsy herimpo very maina ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ataon'ilay Nahuatl mpanao gazety , Miryam Vargas
Voadika ny 19 Mey 2022 13:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Nederlands, srpski, Español, Esperanto , Português, Italiano, English
“Tany iray mila arovana ny hoavy.” Sary fanaingoana avy amin'i Futuros Indígenas, fampiasàna nahazoana alàlana
Niteraka resabe momba izay fomba hiatrehana ny krizin'ny tontolo iainana manerana ny tany ny Andron'ny Tany tamin'ny 22 Aprily. Mba hanampiana antsika hahatakatra izay azontsika ianarana avy amin'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany dia niresaka tamin'i Miryam Vargas ny Global Voices. Izy dia Nahuatl mpanao gazety avy ao Choluteca, Meksika,
Mitatitra momba ireo olan'ny tontolo iainana i Vargas ary niaraka niasa tamin'ny vondrompiarahamonina niaviany nandritra ny folo taona mahery. Mino izy fa any anatin'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany sy tambanivohitra no fanalahidin'ny hamehana ara-toetrandro sy tontolo iainana, fa tsy ireo vahaolana Tandrefana, tanandehibe na “kapitalista maintso”. Tian'i Vargas ihany koa ny hanafoana ireo fomba fitantarana manary toky (fatalism) hoe “samy ho faty daholo ihany isika rehetra.”
Izy dia mpikambana ao anatin'ny Futuros Indígenas (“Hoavin'ny Vazimba”), tambajotra iray misy ireo vazimba teratany mpanao gazety ao Meksika izay miasa mba hamerina hamaritra indray ny hamehana ara-toetrandro amin'ny fomba filazan-dry zareo azy. Itoloman-dry zareo ny fanoherana ireo fitantarana efa lany andro momba ireo vahoaka vazimba teratany, ny fampandrosoana ary ny fahoriana lalina manarona ireny olana ireny.
Ao amin'ny Futuros Indígenas, nosaininay ny zavamisy hoe io [fahaverezan-toky io] dia tsy maneho velively ny zavatra iainanay any anatin'ny vondrompiarahamonina misy anay. [Sady koa] tsy izahay irery no tompon'ny andraikitra tamin'io krizy io. Antsoinay ny isam-batanolona mba ho tonga saina hoe ireo orinasa manokan-tena hanao fihariana voafaritra manokana no tena fototry ny olan'ny fiovaovàn'ny toetrandro. Misy ireo orinasa maka ireo loharanon-karena voajanaharin'ny tany manontolo.
Ohatra, hatramin'ny 1988 dia 100 monja ireo orinasa tomponandraikitra amin'ny 70%-n'ny fandefasana entona miteraka fihafanàn'ny tany, ary mihoatra ny antsasaky ny fandefasana entona manafàna ny tany manerana izao tontolo izao no tsy avy aiza fa avy amin'ireo orinasa 25 an'ny fanjakana na tsy miankina. Ny fiantraikan'ny tsy fihetsehana manoloana ny fiovaovàn'ny toetrandro dia zavadoza ho an'ny zanak'olombelona sy ireo karazan-java-mananaina hafa. Tsy resaka solika azo avy amin-javatra lo fotsiny ny fiovan'ny toetrandro — tafiditra ao koa ny fanimbana ny rohivoary sy ny hamaroam-piaina, ny fandripahana ala, ny fanjifàna tafahoatra ny loharanon-karena voajanahary (voaray amin'izany ireo indostrian'ny teknôlôjia sy ny lamaody), ny fanaovana voly indostrialy, sns…
Rehefa ampitahaina, ireo vahoaka vazimba teratany no miaro ny 80 isanjaton'ny fifangaroam-piainana eto an-tany sy tena mitàna anjara toerana lehibe amin'ny ady atao hanoherana ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ohatra, ny ala mando ao Amazôna no manome ny 20 isanjaton'ny oksizena erantany. Hoy i Vargas:
Ao anatin'io fanovàna ny fitantaràna io, tianay ny hiresahana, ambonin'ny zavatra rehetra, momba ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany sy tambanivohitra, sy hamerina ho eo anivo ny fomba fanorenantsika fiainana, ny fomba fitsaboantsika ny tany sy ny habakabaka, ary na dia ny eny amin'ireo toerana nisy tetikasam-pitrandrahana harena an-kibon'ny tany aza.
Tian'i Vargas ny olona mba hiaiky fa ohatra iray mendrika ho arahana ny fomba fiainan'ireo vazimba teratany raha tiantsika ny hamaha ny krizin'ny toetrandro sy hiaina mifanaraka amin'ny tontolo iainana.
Ho averintsika raisina ireny fitantarana ireny, amin'ny fampiasàna ireo teny mahabe fanantenana ka hamelona indray ny fahasahiana izay indraindray very miaraka amin'ny zavatra rehetra mitranga. Ananantsika hoavy feno fanantenana, tafita isika isaky ny manohy mamafy, isaky ny manohy miaro ny fiainana, ary isaky ny manohy mifampikarakara isika amin'ny maha-olona, sy koa isaky ny tohizantika ny fisiantsika, dia eto isika.
Ny tena mitondra fandrisihana ho azy dia ny hafaliana entin'ireo fombandrazana, taokanto, ary fiteny. Ny fiteny, indrindra indrindra, dia fon'ny maripamantarana ny vondrompiarahamonina niaviany ary singa iray tsy misaraka amin'ny ady ataony hiarovana ny rohivoary eto an-tany.
Any anaty vondrompiarahamonina marobe, nampidirina mihitsy aza ny tenindreny mba ho ao anatin'ny fanovàna ny fomba fitantaràna [momba ny toetrandro]. Amin'izay fotoana izay, hirafitra mafimafy kokoa izahay samy izahay satria resahanay amin'ny antsipirihany ny fahitànay ny tontolo (cosmovision) amin'ny maha-vahoaka teratany anay ary jerenay hatrany amin'ny fotony izay mahatonga ny jalinay, nefa koa izay mampanakaiky kokoa anay amin'ny tany.
Miaro ny aina
Ivon'izay rehetra saininy ny fiarovana ny aina (la defensa de la vida), indrindra fa amin'ireo izay antsoiny hoe “fomba fanao mitondra fahafatesana ho an'ny tany.” Ho azy, ny fampifantohana ny adihevitra amin'ny fiainana dia midika fisaintsainana amin'ny resaka fisiana miaraka amin'ireo karazan-java-mananaina samihafa ao anaty habaka iray voafaritra.
Rehefa fiarovana ny fiainana no resahantsika, dia momba ny fiarovana ireo fepetra (isian'ny fifangaroam-piainana) ihany koa izany mba hanohizana ny fisiana, hanohizana ny fananana antoka fa mbola hisy (ho velona).
Kanefa, tohanany fa ny sasantsasany amin'ireo tetikasam-pampandrosoana dia tsy miraharaha ireo olana momba ny fifangaroam-piainana. “Tsy misy intsony ny rano, ny tany, ary voaloto ny rivotra. Mitondra aretina ho an'ny olona izay mba hany sisa rano na tany tavela,” hoy izy.
Ireo Mines (toerana fitrandrahana harena an-kibon'ny tany) — ampiasaina hakàna sy ivarotana ireo vy ilain'ny fotodrafitrasa sy ireo fitaovana teknôlôjika manerana ny tany — dia mandoto ny làlan-drano, manimba ny ala, ary ny fiafarany dia manohintohina ny fahasalaman'ny vahoaka eo an-toerana, mamindra toerana azy ireo, ary mandray anjara amin'ny fifandonana sôsialy. Matetika ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany sy tambanivohitra ao Amerika Latina no manao hetsika fanoherana ny fametrahana ireo toerana fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, tohodrano, sy tetikasa hafa hametrahana fotodrafitrasa goavana, ary na hamoizany ny ain-dry zareo aza. Taorian'ny niampangàna ireo vokadratsy manimba ateraky ny fantsona iray fitaterana solika, sy toerana famokarana herinaratra avy amin'ny fampiasàna hafanana (thermoelectric ), ary fantsona iray fitaterana rano mandalo amin'ny vondrompiarahamonina misy azy, nisy mpanafika tsy fantatra niditra an-kery tao an-tranon'i Vargas, in-droa tamin'ny Aprily 2022.
“Tena mahazendana ny mahita hoe maninona ireny tany manankarena ireny, io harena hafa io, no toy ny pejy fotsy tsy mbola nanoratana sy vonona handray fampandrosoana no iheverana azy,” hoy i Vargas.
Ny ankamaroan'ireo vokatra indostrialy sy ny fambolena any amin'ireo faritra ambanivohitra dia mandeha mankany amin'ireo tanandehibe daholo. Araka izany, mba hampihenàna ny vokadratsy ateraky ny fampandrosoana, hoy i Vargas mandresy lahatra ny amin'ny tokony hampihenan'ireo mponina an-tanandehibe ny fanjifàn'izy ireo. Hoy izy:
Amin'ny maha-vondrompiarahamonina [tambanivohitra] dia tsy afaka ny ho velona intsony izahay, ara-bakiteny io, tsy afaka misotro rano intsony, tsy afaka mifoka rivotra intsony, loaran-dry zareo daholo izay zavatra rehetra mandrafitra ireo fepetram-pahavelomanay ary entiny any amin'ireo toerana amokarany fomba fiaina mitroka izay rehetra mety hahasoa ireo olona an-tapitrisa.
Tsy mila vahaolana avy any Andrefana
Ny ankamaroan'ireo firenena Tandrefana sy ny ao amin'ny Helodrano dia manjifa loharanon-karena mihoatra lavitra noho izay azon'ny tany soloina (tsentsenana). “Tsy mandaitra akory ireny fomba fiaina ireny,” hoy i Vargas. “Ao anatin'ny vondrompiarahamoninay, amin'ny fomba fiainanay, vitanay ny nanatratra ny fifandanjàna hatreto, ary tsy maintsy miverina amin'izany izahay.”
Noho io antony io no tsy inoany hoe avy any Andrefana sy ireo tanandehibe no hahitàna ny vahaolana amin'ny resaka hamehana momba ny toetrandro, fa any amin'ireo vondrompiarahamonina tambanivohitra sy vazimba teratany.
Tsy any mihitsy ny vahaolana amin'ilay krizy, na any amin'ny Avaratra na any amin'ireo orinasa goavana, fa aty amintsika monina eto, akaiky kokoa ny tany, izay mamboly katsaka sy tsaramaso ary, noho ireny fomba fanao ireny, manasitrana ny tany amin'ny zavatra ataon'ireo indostria, zava-panaony izay miafara amin'ny fanimbàna ny faritra rehetra amin'ny tanintsika.
Izany tsy milaza hoe tsy manana izay iraisany amin'ireo olona hafa manerana izao tontolo izao ireo vondrompiarahamonin'ny vazimba teratany ao Meksika — tsy izany velively.
Tany amin'ny kaonferansa COP-26 natao tao Glasgow tamin'ny taona lasa, namporisihan'ireo olona tonga avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ry Vargas sy ny namany, olona niaraka nanana fijery mitovy aminy momba izay hoavy hafa mety hananan'ny tany.
Tsy hahavita hampisaraka antsika raha ireo kabary nasiônalista, isika dia vahoaka mifamatotra sy miray amin'ny endriny samihafa. Rehefa mihaona isika, manana fomba amam-panao maro isankarazany izay mifanojo amin'ny lafiny maro no sady koa, izay mihitsy, iraisantsika ny fiahiana ny tany.
Araka izany, izany no antony ilazànay fa izahay no hoavin'ireo vazimba teratany. Rehefa anontanian'ny rehetra ny momba izay fomba ataonay mba hivoahana amin'io krizy io, dia ambaranay fa ‘eto no vahaolana!’. Tsy mila mandeha lavitra izahay vao hahita azy io, amin'ny maha-solontena velona dia misy izahay, manorina ary mamadika safidy hafa.